Home Wararka Maalqabeynka weyn ee reer Somaliland oo dhaliilay qaaraanka Midowga Yurub
Maalqabeynka weyn ee reer Somaliland oo dhaliilay qaaraanka Midowga Yurub
Aasaasaha shirkadda Worldremit isla markaana ah Guddoomiyaha Hay’adda Sahamiye Foundation, Ismaaciil Ibraahim Axmed, ayaa si adag u dhaliilay Qaadhaan $100,000 oo Midowga Yurub ku yaboobay inay ka qayb-qaadanayaan taakuleynta ganacsatada xoolahooda ku waayey Suuqa gubtay ee Waaheen.
Midowga Yurub ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku yaboobay taakulo dhaqaale oo gaadhaysa 100 Kun oo Dollar, taas oo ay sheegeen inay ku caawinayaan ganacsatada yar-yar ee ku caydhoobay masiibadii dabka ee ku dhacday Suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa.
Ismaaciil Cabdilaahi oo daba-socda qaddarka lacagta ah ee Midowga Yurub ku yabooheen, ayaa sheegay in Qaadhaanka 100,000 kun ee Dollar ahi uu sawir qaldan ka bixinayo gurmadka Suuqa Waaheen iyo taakuleynta Ganacsatada yar-yar ee Suuqa Waaheen oo loo qaybiyey lacag ka badan 2 Milyan oo Dollar.
Guddoomiye Ismaaciil Ibraahim waxa uu arrintan kaga hadlay qoraal kooban oo uu caawa soo saaray, waxaanu yidhi, “War saxaafadeed aad loo buunbuuniyey oo EU-du soo saartay ayaa lagu sheegay in ay deeq dhan €100,000 soo marin doonto hay’ad kale oo ganacsatada yaryar ee Waaheen ka caawin doona in ay iibsadaan “cunto iyo biyo” ganacsigoodiina dib u bilaabaan.
War saxaafadeedka oo aad looga soo shaqeeyey wuxu deeqdan yar ka dhigay mid ka miisaan weyn dhammaan wixii dadkeennu bixiyeen marka Google laga baadho gurmadkii suuqa.” Sidaas ayuu qoraalkiisa ku yidhi Ismaaciil Ibraahim Axmed, aasaasaha worldremit isla markaana ah guddomiyaha hay’adda Sahamiye Foundation.
Warbixin qiimeyn ah oo ay soo saareen Guddiga heer Qaran ee madaxweynuhu u magacaabay taakuleynta Suuqa, ayaa lagu sheegay in khasaaraha dabku soo gaadhsiiyey suuqa Waaheen lagu qiimeeyey adduun lacageed oo gaadhaya $2 Bilyan.
Previous articlePuntland oo xukuno kala duwan ku riday dhalinyaro ka ganacsata mandooriyaha
Next articleQRCS to provide water, sanitation services to 523,000 in 6 countries
Madashada Xisbiyada oo ka horyimid qorshe Farmaajo ku Afduubo doorashada 2021
Hassan Ali Kaire oo codsaday in fursad loosiyo inuu xilka ku...